Apple Imemezela New iPhone SE - Izindaba Rule
Apple Imemezela New iPhone SE
Bathuthukisa iPhone 5S kuletha phone yenkampani kulencane kuze kufinyelele par 2015 iPhone 6s, kuyilapho sonkana kulabo abafuna ifoni ezincane
Lesi sihloko osesikhundleni “Apple umemezela iPhone SE: ezincane, smartphone eshibhile” kwalotshwa Samuel Gibbs, The Guardian ngoMsombuluko 21 March 2016 22.43 UTC
Apple uye Bucked sikhulu kuhamba kangcono mkhuba ifoni futhi ukhiphe inguqulo bathuthukisa ye 4in iPhone ngeti-5 kuya, entsha iPhone SE.
Kuyoba smartphone kulencane uhlu lwezinhlelo zamanje Apple kanye smartphone okokuqala adedelwe nge screen ezincane kuno 4.7in kusukela iPhone 6 wadedelwa ngo-September 2014.
Greg Joswiak, VP umkhiqizo marketing Apple, wathi: "Abanye abantu bamane athande amafoni ezincane. Futhi ngokuvamile ifoni 4in kuyinto iPhone wabo wokuqala. Abanye abantu babebuza namaphoyisa futhi ulivumile leli nathi. Ngakho siyakucela ngokuthi iPhone SE. 4in ifoni Wethu enamandla kunazo zonke ezake. "
The iPhone SE - mhlawumbe harking emuva egameni kuya computer Macintosh SE, eyakhishwa ngo 1987 - Has a efanayo ifomu-isici 2013 iPhone ngeti-5 kuya. It has a body metal, 4e screen, Touch ID zeminwe Enani kanye nekhamera lens ezishaywayo, ngokungafani iPhones Apple kwakamuva. Ifoni kuzotholakala black, white, igolide kanye igolide.
Ngaphandle idivayisi ufana iPhone 5S kodwa ingaphakathi uyofana iPhone 6s, usebenzisa Apple A9 processor, i chip NFC nge support for Apple Pay kanye kangcono 12-megapixel ikhamera, kuhambisana Apple 2015 iPhones.
The iPhone 5S, umkhankaso e 2013. Photograph: Marcio Jose Sanchez / AP
I iPhone SE ine kabili amandla processing kanye kane ihluzo ukusebenza of the iPhone 5S, kanye ukuphila kwebhetri isikhathi eside.
Apple uthemba ukuthi smartphone ezincane ngeke ukugculisa labo namanje usebenzisa i-iPhone 5, 5S noma 5c, kodwa abafuni ifoni elikhudlwana ubukhulu 4.7iPhone 6s noma 5.5e 6s Plus, ukuze kuthuthukiswe. Cook ilinganisela ukuthi 60% of labo besebenzisa iPhone Apple ezincane ziye ungakabi ukuthuthukiselwa lokuthola iPhone 6 noma entsha, okusho ukuthi kunethuba imakethe enkulu elinde ukuba athephwe.
Nkulu screen smartphone baye bazibonakalisa popular futhi baye bavumela abakhiqizi ukwengeza izici ezingaphezu osekelwa amabhethri emikhulu, Apple iPhone ne 4.7in yayo screen is wahlala omunye kulencane.
Njengomuntu ezincane, smartphone premium, entsha iPhone SE kancane endleleni wokuncintisana. Kuphela Sony ekhiqiza butholakale iwuhlelo smartphone screen ezincane, ne 4.6e Xperia Z5 Compact. Izincwajana zemininingwane amafoni ezincane ezenziwa Motorola, HTC futhi Samsung bafa-phansi, Izinguqulo eshibhile nezingxenyana ampofu ukuthi libhekise isigaba more isabelomali-abazi emakethe.
Kungakhathaliseki kukhona namanje sifuna ezincane smartphone premium-ontengo yakhe yayinqunyiwe kusazobonakala. Ingcindezi kwehle on intengo kuye kwasho Smartphones ehloniphekile manje kubiza kancane njengoba £ 130, izici ezifanayo phezulu-ekupheleni models kubiza izikhathi ezine intengo zabo.
Ngoba Apple, iPhone SE limelela indlela ukukhomba sezimakethe izindleko-sensitive ngaphandle oqhothé emazingeni isabelomali. Esikhathini esidlule inkampani uye wasebenzisa onobuhle amadala iPhone, nokugcina 2012 iPhone 4S ukudayiswa kuze kube ukukhululwa kwe-iPhone 6 in 2014, futhi onobuhle owedlule ngaphambi kwalokho. Kodwa ukuthengisa Smartphones amadala kanyekanye onobuhle ezintsha ungeze umthwalo yenkampani ukuze alondoloze izibuyekezo smartphone isikhathi eside, okuyinto ngokuvamile enza for ngemva kokukhululwa okungenani iminyaka emithathu.
The iPhone SE, ne internals esifana i-iPhone 6s kodwa ngentengo ephansi, is lula ukubhekela nge updates software ngoba kunciphisa inani hardware yokwahluka Apple kufanele yeseke.
The iPhone SE bayokhululwa on 31 Mashi, pre-oda eziqala 24 Mashi, kubiza kusuka $399 e-US, noma £ 359 in the UK, ngoba 16GB wesitoreji; $499 e-US, noma £ 439 in the UK, nge 64GB wesitoreji.
Apple osolwa ngokuzama ukwenza iPhone 'incwadi egunyaza-ubufakazi' in FBI kwenzeka
Ungenzi, usishiya phansi isikole iPhone zokusebenza akusizi londoloza ibhethri, Apple uthi
'10 Izinto baseMelika Ukusingathwa Money On '
Umbiko: Google yokwakha angenabashayeli Cars Its
Ngisho nomabonakude Can ukuqoqa idatha On You, Siyabonga Tom Samsun ...
23968	5 I-Apula, Isigaba, iOS, iPhone, iPhone 5s, kwesigaba Main, Omakhalekhukhwini, Izindaba, Samuel Gibbs, Smartphones, Technology, The Guardian, UK news
← Siyakwamukela emsebenzini Robot-Isekelwe Virtual Reality Porn liyeza →